Global Voices teny Malagasy » Heloka Bevava sy Famaizana ao Kazakhstan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Aogositra 2017 16:51 GMT 1	 · Mpanoratra Leila Tanayeva Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Kazis Toguzbayev, mpanao gazety iray izay nampiakatra ireo lahatsorany tao amin'ny bilaogy itambarambe iray, KUB , no notsaraina  tao Almaty, Kazakhstan, ny 22 Janoary 2007. Tao anaty lahatsorany, nanao tsilian-teny i Toguzbayev hoe nosarontsaronan'ny Filoham-pirenena ireo famonoana olon'ny mpanohitra. Voaheloka roa taona an-tranomaizina izy noho ny fandikàna ireo andàlana voalazan'ny Lalàna momba ny Fanendrikendrehana mifehy ny fanimbazimbàna ny voninahitra sy ny fahamendrehan'ny Mpitondra amin'ny fampiasana ireo media.
Teo amin'io blaogy io ihany, navoakan'i Toguzbayev avokoa ireo tahirin-kevitra mikasika ny fitsaràna azy, hatramin'ny fanapahankevitry ny Fitsaràna, niteraka adihevitra manodidina ny raharahany.
Nanoratra i Iwann (Ros) hoe:
Aza atahorana ireo matahotra anao!… Na dia soa ihany aza fa tsy nofonjana izy – ho tsara ho an'ny ady hisian'ny demokrasia izany.
Namaly i Aziat (Ros) hoe:
Aza miahotra ny tenanao manandrana an'io. Manorata zavatra mahatezitra sy mahatsiravina, avoahy ao amin'ny aterineto ary miandrasa. Rehefa manenjika anao izy ireo, kiakiaho hoe – ” ‘satraps!’ mpamono olona”, dia izay. Ho fonjaina ianao. Ho voninahitrao io ary ho mpisava lalana ny demokrasy ianao.
Nanambara i M. Heidegger (Ros) fa:
Tsy hiantso an'io ho fandresena, saingy nanao zavatra betsaka mikasika ny fahalalahana miteny tao Kazakhstan i Toguzbayev.
Fitsaràna ireo Dokotera: Anaty Trano Mikatom-baravarana
Nifarana tamin'ny 19 Janoary niaraka tamin'ny fitsaràna ireo olona 21 ny fanadihadiana mikasika ny trangana zazamenavava 87 tratry ny VIH tao amin'ny tobim-pitsaboana tao Kazakhstan-Atsimo, ny 18 tamin'ireo 21 dia mpiasan'ny fahasalamana, tao amin'ny Fitsaran'ny Distrikan'i Shymkent. Hatramin'ny fisokafanan'ny raharaha, zaza 8 no maty, ary natsagan'ny olom-pirenena Amerikana ny iray tamin'ireo. Na ny vahoaka na ny media dia samy tsy nahazo alalana ho tonga hanatrika ny fitsarana. Samy tsy nisy navoaka avokoa ny anaran'ireo niharam-boina sy ny an'ireo voampanga. “Veloma ry Demokrasy!” hoy ny tsikeran ‘i romanil , ilay mpampiasa LJ ao anatin'ny vondrom-piarahamonina mpanao politika ao Kazakhstan.
Niahiahy  i Mira Baktyhova avy amin'ny neweurasia fa hanana fe-potoana iray ny voampanga – mpiasam-panjakana ambony ny sasantsasany tamin'ireo. “Nangatahana tsy hanelingelina mpitsara mikasika io raharaha io ireo solontenan'ny media ary tsy hisy hahazo fanehoankevitra izy ireo na dia amin'ny alalan'ny finday akory aza. Heverina ho toy ny tsindry ataon'ny media amin'ny fitsaràna avokoa ireo fanontaniana avy amin'ireo mpanao gazety.”
Zanaka lahin'ny Solombavambahoaka: Hisy fitsaràna ve?
Tamin'ny 19 Janoary i Serik Ayashev, zanaka lahin'i Onalsyn Ayashev, Mpikambana ao amin'ny Parlemanta, dia nitifitra ny mpiambina iray tao amin'ny iray amin'ireo tranon'ny sangany tao Astana. gulimeo mpampiasa LJ nampahafantatra  (Ros) fa ny andro nisian'ilay trangan-javatra, tsy nosamborin'ny mpitandro filaminana i Ayashev-junior, araka izany dia nanome azy fahafahana hilefa. Nanome toky ny rainy fa hankany amin'ny mpitandro filaminana i Serik Ayashev izy tenany. Saingy tsy nataony izany. 9 andro taty aorian'ny niandrasana azy vao nosamborina izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/17/105349/
 no notsaraina: http://kazakhstan.neweurasia.net/?p=245